Izipaji kunye nezixhobo ezenziweyo ezenziwe ngamatayara aphinda asetyenziswa | Ukuhlaziywa okuluhlaza
Adriana | | Yendalo, Ukusetyenziswa kwakhona
Abaqulunqi abaninzi kunye neenkampani emhlabeni baqala ukusebenzisa njengezinto ezingafunekiyo udiniwe ngaphakathi iityhubhu Ekwenziweni kwezipaji kunye nezinto ezifana nezipaji, amabhanti, izipaji, amakhonkco abalulekileyo, ilaptopbag, njl.
El irabha yevili Kuvele into ebumbekayo kwaye ifanelekile ukubuyisela isikhumba kwimpahla yesikhumba. Ngerabha kunokwenzeka ukuyinika ungenelelo olulunge kakhulu kokubini ukongeza ubungakanani, ukuvalwa, njengokuthunga, ukuyidaya okanye nokuyipeyinta ukuze ukwazi ukuyenza ngendlela eyahlukileyo.
Los amatayara Iibhayisikile, izithuthuthu, iilori, iimoto kunye neetrektara zisetyenziselwa ukwenza iimveliso.
Kungenxa yoko le nto kukho iinkampani ezininzi, amagcisa kunye nabaqambi abazisebenzisayo ekwenzeni Iimveliso ezinobume bendalo.
Abanye babaqulunqi abaziwayo zezi:
Ipasipoti: yenye yeenkampani ezibaluleke kakhulu kuyilo lwe iingxowa ezirisayikilishwe. Iimodeli zayo zilungile kumadoda nabasetyhini. Uninzi lwabantu abadumileyo basebenzisa olu hlobo lweengxowa ezirisayikilishwe. Umgca wabo wonke ungowona mgangatho ubalaseleyo kunye nokusika.
Uphawu lwe-Ecooriginal: le nkampani ivelisa kwaye ithengise izipaji kunye nezixhobo kuyo yonke i-European Union. Iimveliso zayo ezizodwa ngokupheleleyo okoko inkqubo yemveliso inyamekile ukugcina i-aesthetics yetayara njengoko yayinjalo ukuze ubume bayo kunye nomfanekiso wahlukile.
Ubugcisa beCinnamon: Eli phulo lijolise ekwenzeni iimveliso ezizodwa ezinempembelelo kwindalo esingqongileyo yiyo loo nto isebenzisa iimveliso ezirisayikilishwe ezinje ngamatayara kodwa iphinde isebenzise phantse umbane kwimveliso yayo ukuze ibe yeyendalo ngokupheleleyo kwaye yenziwe ngezandla.
I-Pneumatics: Le yinkampani yaseArgentina ephinda isebenzise amavili ukwenza iibhegi kunye neebhegi zobukhulu bonke.
I-Boo Noir: Olu hlobo lophawu lokunxiba olu-eco-friendly kunye nokuziphatha luvelisa iibhegi kunye neebhegi zisebenzisa amavili njengezinto ezingavuthiyo. Uyilo luyinto yokwenene kwaye ngaphezu kwayo yonke inobuhlobo nendalo.
Zonke ezi zinto zoyilo zilungile ngokwendalo kuba ziphinda zisebenzise inkunkuma elahliweyo yakuba igqityiwe ukusebenzisa njengamavili. Kodwa banazo uyilo lwangoku, oluhle kwaye kwangaxeshanye basebenza ngokupheleleyo.
Ubugcisa, i ukurisayikilisha kwaye inkxalabo yezendalo iqhuba abantu abavela kwiindawo ezahlukeneyo zehlabathi ukuba bavelise ezinye iimveliso eziluncedo kodwa ezinyamekela indalo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Yendalo » Ukusetyenziswa kwakhona » Izipaji kunye nezixhobo ezenziweyo ezenziwe ngamatayara aphinda asetyenziswa
Ndiyazi kuphela uphawu lwePasschal kunye neBoo Noir brand. Kwivenkile kaBoo Noir ndathenga ibhegi yamatayara ehlaziyiweyo kwiminyaka emibini edlulileyo, kwaye ingathi intsha. Kwaye ibhegi eyathandwa kakhulu ngabahlobo bam ... ngokuxhasa okusingqongileyo ungaya nakwifashoni kwaye, enengxowa yoqobo.
UJorge Pedro Astorga sitsho
i-mbg ecomundo sisixeko sase-San Luis saseArgentina esinezixhobo zerabha, okanye kwi-facebook San Luis izipaji zerabha.
Phendula Jorge Pedro Astorga
UAdriana Restrepo uyilola. sitsho
Molweni nonke, kukho inkampani encinci eMedellin eColombia evelisa iimveliso ezinamavili asetyenziswayo. kwindalo esingqongileyo iADRIANA RESTREPOA.
Phendula ku-adriana restrepo agudelo.